९ हजार एसईई दिएका परीक्षार्थीको नतिजा एकाएक उल्टियो : यसरी हेर्नुहोस् नयाँ नतिजा !
असार १३, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, १३ असार – एसईई नतिजा प्रकाशनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको त्रुटिले समग्र नतिजा नै परिवर्तन भएको छ । त्रुटि पत्ता लगाएपछि ९ हजार ६४ विद्यार्थीको ग्रेडसिटमा जीपीए थपघट भएको छ ।
३.६५ देखि ४.० जीपीए, ३.२५ देखि ३.६० र २.८५ देखि ३.२० जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नतिजामा फेरबदल आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दाबी गरेको छ । पहिलो दिन नतिजा प्रकाशन गर्दा ३.६५ देखि ४.० जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या १४ हजार ७ सय ७२ थियो । कार्यालयका अनुसार त्रुटि सच्याएपछि उक्त संख्या बढेर १८ हजार ४ सय ३५ पुगेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
त्यस्तै ३.२५ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार ९ सय ४१ छ । यसअघि ४७ हजार ८ सय ९६ जनाले मात्रै उक्त जीपीए प्राप्त गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । २.८५ देखि ३.२० जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या भने ५१ हजार ७ सय ९ बाट घटेर ५१ हजार १ सय ५ भएको कार्यालयका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले जानकारी दिए ।
कार्यालयले ग्रेडिङ (अक्षरांक) पद्धतिबाट ९ वटा श्रेणीमा नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । तीमध्ये माथि उल्लेखित तीनवटा श्रेणीमा बढी गडबडी भएको लुइँटेलले स्विकारे । ‘परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको नम्बरलाई ग्रेडमा रूपान्तरण गर्ने बेला त्रुटि हुन पुगेको देखिन्छ, अन्य श्रेणीमा पनि नम्बर बढेको छ । सिस्टमले माथिल्लो जीपीए देखाउनुपर्ने बेला तल्लो देखायो,’ उनले भने, ‘गल्ती लुकाएर सिधै विद्यार्थीलाई बढेको ग्रेडसिट दिन पनि सकिन्थ्यो तर गल्ती लुकाएनौं ।’
विद्यार्थीले विभिन्न विषयमा प्राप्त गरेको ९०, ७०, ५० र ३० प्राप्तांकलाई ग्रेडमा बदल्दा त्रुटि हुन पुगेको पारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अझै रुजु गर्ने काम जारी छ । नियमिततर्फ साधारण र प्राविधिक धारका ४ लाख ६० हजार विद्यार्थीमध्ये ९ हजार ६४ को नतिजा बढेको हो । यीबाहेक विगत वर्षमा जस्तै सामान्य प्रकारका त्रुटि पनि छन् ।
शनिबार साँझ सार्वजनिक नतिजामा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या २४ थियो । त्यसको २४ घण्टापछि आइतबार साँझ कार्यालयले ग्रेडसिटमा त्रुटि भएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरेर वेबसाइटमा अर्को नतिजा राखेको थियो ।
अहिले ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेर ७४ जना पुगेको छ ।
नतिजा हेर्न यो लिंकलाई क्लिक गर्नुहोस्: http://www.see.ntc.net.np/
प्रकाशित : बुधबार, असार १३, २०७५१६:२३
छोराको बिहे भोजबाटै पक्राउ परेका राजु दारुकाले भने- ‘६ सय किलो अवैध सुनको कारोबार गरेको हुँ’
गाडी बन्द गर्ने व्यवसायीको रुट परमिट आजै खारेज गरीने
प्रदेश नं ७ः मुख्यमन्त्रीका लागी दावी गर्न अाह्वान
आईपीएल सट्टेबजीमा गुण्डा नाईके दावा लामाको पनि संलग्नता !
फिल्म कथाले मागेको होइन देशले मागेको बनाउनुहोस् : प्रधानमन्त्री ओली
चुनाबका बाचा जितेको २० दिनमै पुरा, सोलार लिफ्टिङ्गबाट गाउँमा पानी झरेपछि स्थानीय खुसी
सानेपामा बबाल, गगन थापा पक्षका विद्यार्थीद्वारा विमलेन्द्र निधिमाथि दुर्व्यवहार !
सामाजिक संजालबारे बास्कोटाले भने ; गालीमात्र गर्छ भन्ने सुनेको छु, यसपाली मिडियासँग सहयोग माग्न चाहन्छु